One Stop ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှု
CBPMM အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းမှလိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းနှင့်ရှိပြီး အဲဒီ ISO 9001: 2005 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်၏ညွှန်ပြဖြစ်သည့်လက်မှတ်။
ကျနော်တို့ပါဝင်သည်သောဖောက်သည်ပိုမိုစုံလင်လာထုတ်ကုန်ပူဇော် , ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှိုချမှတ်ခြင်းနှင့်ပိုက်မှိုချမှတ်ခြင်းပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာ, မော်တော်ကားတန်ဆာ, ပလပ်စတစ်မှိုချမှတ်ခြင်း, ပုလင်းဦးထုပ်တန်ဆာ, အီလက်ထရောနစ်မှိုချမှတ်ခြင်း, ချ. သေဆုံး, အိမ်သုံးပစ္စည်းမှို။
ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့ နောက်ဆုံးထုတ်နှင့် State-Of-The-Art စက်ယန္တရား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်သေချာစေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ။ CBPMM တိကျတဲ့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံများအတွက်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးကြောင့်လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရနိုငျသညျ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မား, အရည်အချင်းပြည့်မီလေ့ကျင့်သင်ကြားနှင့်အကျိုးရှိစွာလုပ်သားအင်အားအတွက်မာနထောင်လွှားယူပါ။ ကျနော်တို့က 24 နာရီအတွင်းခွဲတမ်းဖြည့်ဆည်းဖို့ capacitated နှင့်နိုင်ပါတယ် နမူနာများကို အတွင်းဖောက်သည်ဖို့ပလပ်စတစ်မှို၏ 3-5 ရက်အတွင်း .
အလွန်အမင်းစျေးနှုန်းများအထိခိုက်မခံအဆိုပါပလပ်စတစ်မှိုကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း။ စျေးနှုန်းဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်လွှမ်းမိုးများအတွက် key ကိုပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဤစက်မှုလုပ်ငန်းဒိုင်းနမစ်နှင့်စျေးနှုန်း၏တန်ခိုးကိုနားလည်ဤသို့ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်ဖို့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအများကလေးစားဖောက်သည်တချို့ကပါဝင်သည် စသည်တို့ကိုတိုယိုတာ, ဟွန်ဒါ, Nissan ကား, ဆူဇူကီး, General Motors က, Ford ကား, Audi, Volkswagen က ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ဟာယပူဇော်သက္ကာ, အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဖောက်သည်တစ်ဦး-ဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုမှတဆင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးတညျဆောကျပါပွီ အမည်နှင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့ဂုဏ်သတင်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကတော့ဒီအသိအမှတျပွုနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါတို့အဘို့အကျနော်တို့မှာအများကြီးကျေနပ်စရာတည်းဟူသောကိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကိုဆက်လက်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်နှစ်အတွင်းတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အခြေခံပေါ်မှာငါတို့ client ကိုရဲ့တောငျးဆိုခတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။
CBPMM က၎င်း၏ဖောက်သည်ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှိုန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်မျိုးစုံပေးစွမ်းသည်။ ကျနော်တို့ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာများကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများ, မော်တော်ကားတန်ဆာ, ပလပ်စတစ်မှိုချမှတ်ခြင်း, ပုလင်းဦးထုပ်တန်ဆာ, အီလက်ထရောနစ်မှိုချမှတ်ခြင်း, etc ချ. သေပေး
ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာလက်အောက်တွင်, ငါတို့နဲ့တူကွဲပြားခြားနားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော် , တန်ဆာကျော်, etc အအေးပြေးသမားဆေးထိုးတန်ဆာ, ပူပြေးသမားဆေးထိုးတန်ဆာ thermoplastic ဆေးထိုးတန်ဆာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အဓိကထဲတွင်ဖောက်သည်ချပြီး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအားဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းမန်နေဂျာဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာအင်္ဂလိပ်နှင့်အတူကိုလညျးတတျကြှမျး နှင့်အင်္ဂလိပ်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်အတူကြှမျးကငျြစှာပွောဆိုနိုငျသညျ။
ဒီအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ၎င်းတို့၏မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဖောက်သည်ပေးသည်။ ဒါဟာအစမှထွက်ရောက်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည် တဲ့ကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်ထုံးစံ၌သူတို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေး အားဖြင့်မိမိတို့၏ဦးစားပေးဘာသာစကားမှာဖောက်သည်ထိရောက်သောနှင့်အချိန်မီဝန်ဆောင်မှုသေချာ။
CBPMM အမြဲတမ်းဖောက်သည်ဗဟိုပြုကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ဘဲလည်းသူတို့ကိုရန်ပွိုပြီးနောက်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေး, ဖောက်သည်မှထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်သာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့ကိုအပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် purchasing ပြီးနောက်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှိစေခြင်းငှါအရာဆက်စပ်မေးမြန်းချက်အပေါ်ဖောက်သည်တစ်ဦး prompt ကိုများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူသည့်အခါသူတို့ကစိတ်ကိုတစ်ဦးပြည့်စုံငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးပြည့်စုံနှင့်ပြည့်စုံပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးကြိုးစားကြသည်။